တရုတ်နိုင်ငံ၏ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ပထမ ၃ လပတ်တွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံတွင် သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း အပြီးသတ်ပမာဏသည် နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်း ၃၉.၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်း deadweight အလေးချိန်(dwt) တန်ချိန်ပေါင်း ၉.၇၉ သန်း ထိရှိခဲ့ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရှယ်ယာအားလုံး၏ ၄၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ စက်မှု နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန(MIIT) ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
ထို့ပြင် သင်္ဘောသစ် တည်ဆောက်ရေးအမှာစာ ရရှိမှုသည် ယခင်နှစ်အလားတူကာလတွင် dwt တန်ချိန်ပေါင်း ၁၇.၂ သန်းရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၂၅၁.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရှယ်ယာ၏ ၄၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
China’s shipbuilding industry registers robust growth in Q1
BEIJING, May5(Xinhua) — China’s shipbuilding industry sawastrong performance in the first quarter of the year while maintainingalarge global share in terms of completion volume, and new and holding orders, official data shows.
The completion volume of shipbuilding in China, rising 39.8 percent year on year to 9.79 million deadweight tonnes (dwt) in the first three months, accounted for 43.4 percent of the global market share, according to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
Photo taken on March 12, 2019 shows the first China-made cruise ship for polar expeditions, in Haimen, east China’s Jiangsu province. [Photo/Xinhua]